Semalt बाट ब्लग ट्राफिक बढाउने Sec गोप्य
भाइरल जाने लेखहरू सिर्जना गर्नु सबैको लागि प्राथमिकता हो जुन ब्लग सुरु गरेका छन्। वास्तवमा यसको लागि सोच्न-मिल्दो सुसंगत कार्यहरू आवश्यक हुन्छ, जुन सँधै एक आपसमा सम्बन्धित छ। सही सामाजिक मिडिया रणनीति विकास गर्न गुणात्मक सामग्री सिर्जना गर्नबाट, प्रत्येक चरण अपरिहार्य छ। इभान कोनोवालोभ, Semalt डिजिटल सेवाहरूको ग्राहक सफलता प्रबन्धक ब्लग ट्राफिक कसरी बढाउने बारे उपयोगी सुझावहरू साझा गर्दछ।
१. भाइरल सामग्री सिर्जना गर्नुहोस्
रमाईलो, रमाईलो लेखहरू लेख्नुहोस् जुन पाठकहरूको ध्यान आकर्षित गर्दछ। भाइरल सामग्री लेख्दा तपाईंको लेखको शीर्षक सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आकर्षक शीर्षकहरूको साथ आउनुहोस् जुन इन्टरनेटमा आगन्तुकहरूको ध्यान खिच्नेछ। यदि तपाइँको शीर्षक खोजी छ, तब तपाइँ तपाइँको पोष्ट मा अधिकतम हिट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। राम्रो शीर्षक सिर्जना गर्नुको अलावा, लामो जानकारीपूर्ण लेखहरू लेख्नुहोस्। तपाईंको शीर्षकको विवरणहरूमा जानुहोस् र तपाईंको पोइन्ट्सलाई चाखलाग्दो तरिकाले वर्णन गर्नुहोस्। एक विस्तृत पोस्ट तपाइँको ब्लग आगंतुकहरु लाई पुरा लेख पढ़ने को लागी लुक्नेछ। तपाईंको पोस्टमा राम्रो देखिने छविहरू घुसाउनुहोस् ताकि पाठकहरूलाई तपाईंको लेख अझ स्पष्टसँग बुझ्न मद्दत गर्न। नतिजा स्वरूप, तपाइँको पाठक तपाइँको ब्ल्ग पछाडि तपाइँको अर्को लेख पढ्न को लागी आउँछ।
२. तपाईको लेख एक पटक भन्दा बढि शेयर गर्नुहोस्
यदि तपाईं आफ्नो ब्लगमा ट्राफिक बढावा दिन चाहानुहुन्छ भने तपाईले बढि आगन्तुकहरूलाई लक्षित गर्नु पर्छ। केहि पाठकहरू दिनको समयमा इन्टरनेटमा र अरूले रातमा भने। एक दिन वा एक महिना को समयमा धेरै पटक तपाइँको लेख साझा गरेर तपाइँको ब्लगमा ट्राफिक बढाउनुहोस्। मुख्य सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरू जुन तपाईंलाई यो कार्यमा मद्दत गर्न सक्दछन् फेसबुक, ट्विटर, पिन्टेरेस्ट, र Google+। समूह र समुदायहरूमा सामेल हुनुहोस् जुन तपाईंको उद्योगसँग सम्बन्धित छ र तपाईंको फिड साझा गर्नुहोस्।
Right. सहि थिम स्थापना गर्नुहोस्
बजारमा हजारौं थिमहरू छन्। यद्यपि तिनीहरू मध्ये धेरै तपाईंको ब्लगसँग उपयुक्त हुँदैनन्। यसको मतलव तपाईले बुद्धिले छान्नु पर्छ र सहि स्थापना गर्नु पर्छ। एक राम्रो विषयवस्तु पूर्ण रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्दछ, जसले तपाईंको ब्लगलाई डेस्कटपहरू र मोबाइल प्रदर्शन सहित बिभिन्न उपकरणहरूमा पहुँचयोग्य छ भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछ। तपाईंले द्रुत लोडिंग थिम पनि चयन गर्नुपर्छ। जब तपाईंको विषयवस्तु द्रुत रूपमा लोड हुँदैछ, यसले आगन्तुकहरूलाई तपाईंको ब्लग वरिपरि रहन र अधिक पोष्टहरू पढ्न बनाउँदछ। थप रूपमा, सुन्दर र आकर्षक डिजाईन भएको विषयवस्तु छनौट गर्नुहोस्।
Share. शेयर बटन थप्नुहोस्
शेयर बटनले तपाईंलाई विशाल श्रोताको पहुँचमा सामाजिक मिडिया प्लेटफर्महरूको शक्ति उठाउन मद्दत गर्दछ। पाठकहरू सँधै रमाईलो पोष्ट साझेदारी गर्न तयार हुन्छन्। त्यसकारण, पोस्टमा सेयर बटन थप्नुहोस् तपाईंको सामग्रीलाई भाइरल हुन दिनुहोस्। यसको मतलब तपाईका पाठकहरूले तपाईको ब्लग पोष्ट उनीहरूका साथी र फ्यानहरूसँग साझेदारी गर्न सक्नेछन्। यो साझाको नतीजाको रूपमा, तपाईंको ब्लगले अधिक यातायात प्राप्त गर्दछ।
Other. अन्य ब्लगमा टिप्पणी दिनुहोस्
टिप्पणीहरू एक शक्तिशाली उपकरण भएको छ, जसले तपाईंलाई ब्याकलिंक्स र ट्राफिक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। लोकप्रिय ब्लगहरू खोज्नुहोस् र उनीहरूका शीर्षकहरू र फोरमहरूमा टिप्पणी दिनुहोस्। अर्थपूर्ण टिप्पणीहरूले ध्यान आकर्षित गर्दछ, र सम्भवतः, तपाइँ प्रतिक्रियाहरू पाउनुहुनेछ जुन तपाइँलाई ब्याकलिंक्स दिन्छ। टिप्पणीहरूले तपाईंलाई एक विशेषज्ञको रूपमा स्थापित गर्दछ र तपाईंलाई तपाईंको ब्लगमा धेरै यातायात आकर्षित गर्न मद्दत गर्दछ।
Semalt विशेषज्ञ इभान कोनोवालोभले प्रमाणित गर्छ कि माथि उल्लेखित रणनीतिहरूको लगातार कार्यान्वयनले तपाईंको ब्लग ट्राफिक बढाउँदछ। यस्तो अभ्यास सफलतापूर्वक हाम्रो ग्राहकहरु द्वारा अपनाईएको थियो र यसको दक्षता पुष्टि। अब देखि तपाई यी टिप्सका साथ साथ सेमेल्टको पेशेवर सेवाहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ तपाईंको ब्ल्गलाई अर्को स्तरमा लैजानको लागि।